Maqaallo – Shabakadda Amiirnuur
ITOOBIYA OO KU GUULEYSATAY MURUQTUUJINTA AMA HAYMANADA (HEGEMONY) GEESKA AFRIKA
Waxa muuqata oo bannaanka timi awood siyaasadeed ama caskariyeed oo ay Itoobiya muddaba ku taamaysay, taas oo ahayd in ay hesho muruqtuujinta ama haymanada Geeska Afrika, balse dawladihii Soomaaliya soo maray sannadihii 1960-1990kii ay ahaayeen kuwa hor taagan. Inkasta oo wixii ka dambeeyey burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya ciidammaduna hoggaanka […]
IRBAD CEEL LAGU TUURAY!!! (WQ: Dr. Suldaan Garyare)
“NIN YARAAN KU LOOFARAY WUXUU LUMIYEY RAACDEEYE” Waxa aan marar badan ku arkaa baraha bulshada iyo meelaha kale ee lagu baahiyo wararka iyo dhacdooyinka dalka Soomaaliya munaasabado iyo xus loo samaynayo maalmo la soo dhaafay, oo dadka loogu tilmaamayo in ay yihiin maalmo maamuus iyo xurmaynba leh, lana doonayo in […]
Markii ay gaalada reer Galbeedku uu hoggaaminayo ay xoog kaga adkaan waayeen dadka Muslimiinta ah, ayaa waxa ay wax ka beddeleen dagaalkoodii ama duullimaadkoodii. Dagaalkaasi waxa uu isu rogay nooca loo yaqaan dagaalmaskaxeedka (qaswul-fikriga), kaas oo ay iska kaashadeen dhawr qolo oo ah afar kooxood, ka lana ahaa Mubaashiriin, Mustashriqiin, […]
6 Arimood oo ay la Gaar Ahaayeen Go’aanadii Kasoo Baxay Shirweynihii Al-Shabaab. (Maqaal Cusub)
Kadib markaan akhriyay qodobadii kasoo baxay shirka ay qabatay xarakada al-Shabaab, xafiiskeeda qaabilsan siyaasada, go’aanada ay soo saareen ka qeybgalayaasha, kuwaas oo ku qornaa Luuqadaha Soomaaliga iyo English-ka waxay la gaar ahaayeen lix (6) qodob kuwaas oo aan doonayo inaan ku gorfeeyo qormadan kooban: 1- Jihaad Fardu-Ceyn ah: Qodobka 1aad […]
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamad C/llaahi Farmaajo ayaa 2017-kii khudbad uu jeediyay ku sheegay in ciidanka dowladda aysan lahayn caqiido ay ku dagaal galaan, garaneyn hadafka ay higsanayaan taasna sababtay in ay waayaan geesinimo ku dhiiragelisa la dagaalanka cadowgooda. Wargeyska Foreign Policy ayaa isna 2018 qoray maqaal uu cinwaan […]
23-kii Rajab 1441H, waxaa soo gabagaboobay shir socday muddo 5 maalmood ah oo ay qabatay Xarakada Al-Shabaab, kaasoo lagu marti qaaday dad kor u dhaafaya 100-xubnood oo isugu jira odayaal dhaqameed, culimo iyo qaar kamid ah madaxda Al-Shabaab sida ay shaaciyeen warbaahinada kooxda taageera, laguna baahiyey baraha bulshada. Qormadan kooban […]
Sheekh Xasaan Xuseen Aadan oo kamid ah culimaa’udiinka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay cudurka halista ah ee lagu magacaabo Carona Virus. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa albaabada laysugu dhufanayay masaajid ay leeyihiin muslimiinta iyadoo lagu marmarsiyoonayo xadeynta cudurka Carona Virus. Sheekh Xasaan ayaa ugu baaqay culimada muslimiinta iyo jaaliyadaha soomaalida ee dalka […]
Nin socoto ah ayaa beri u yimi niman dhallinyaro ah oo geelley ah, markaas ayuu weyddiiyey qolada ay yihiin. Dhallinyaradii oo aad ugu hanweynaa qolada ay yihiin ayaa yiri waxa aannu ka la nahay “BAH JIIR IYO BAH MULAC”. Ninkii socotada ahaa oo yaabban, una qaatay in dhallinyaradu ay isaga […]